China RXY Series Wash-Sterilize-Fill-Seal Line mpanamboatra sy mpamatsy | Shinva
RXY Series Wash-Sterilize-Fill-Seal
Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line dia ampiasaina amin'ny fanasana, fanatontosana, famenoana ary famehezana tsindrona tavoahangy kely vita amin'ny lovia kely ao amin'ny atrikasa. Izy io dia misy ny endrika mandroso, firafitra mirindra, diplaomatika avo lenta, fandidiana azo antoka sy azo antoka, fahombiazan'ny famokarana avo lenta ary fampidirana mekanika sy herinaratra. Ny ampahany mifandray amin'ny ranon-drongony dia vita amin'ny AISI316L ary ny iray kosa vita amin'ny AISI304. Ireo fitaovana ampiasaina dia tsy misy loto amin'ny zava-mahadomelina sy ny tontolo iainana.
Famaritana vial: 1ml-100ml
Fahaiza-manao: 10-500 tavoahangy / minitra
Mameno ny marina: ≤ ± 1%
Fanasana ultrasonika + fanasana hosoloana rano-Air
Marika misy singa fototra: SIEMENS, GEMU, FESTO, ABB, Schneider, sns.
Toetra mampiavaka azy
* Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line dia ampiasaina amin'ny fanasana, fanamafisana, famenoana sy famehezana tsindrona tavoahangy kely vita amin'ny tavoara ao amin'ny atrikasa. Izy io dia misy ny endrika mandroso, firafitra mirindra, diplaomatika avo lenta, fandidiana azo antoka sy azo antoka, fahombiazan'ny famokarana avo lenta ary fampidirana mekanika sy herinaratra. Ny ampahany mifandray amin'ny ranon-drongony dia vita amin'ny AISI316L ary ny iray kosa vita amin'ny AISI304. Ireo fitaovana ampiasaina dia tsy misy loto amin'ny zava-mahadomelina sy ny tontolo iainana. Ny famolavolana sy ny famokarana ankapobeny dia mifanaraka amin'ny FDA sy ny GMP vaovao.
* Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line dia misy ny milina fanasan-damba ultrasonikaly mitsivalana, fanamainana sy lavenona fanamorana, ary ny masinina famenoana tombo-kase. Izy io dia misy ny fifandraisana amin'ny fandrindrana, ny lalàna mifehy ny hafainganana ary ny fanaraha-maso marina ary afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famokarana.
* Manasongadina ny hafainganam-pandeha avo lenta, ny tahan'ny fahaizana ambony, tsy misy akony, tsy misy fihetsika tsy mety, tsy misy manery ary amin'ny lovia vaky.
* Izy io dia manana fitaovana fiarovana isan-karazany mba hiantohana ny fiarovana ny mpandraharaha sy ny masinina.
* Ny seranan-tsambo manamarina dia natokana amin'ny ampahany lehibe.
* Manasongadina ny fifehezana PLC, ny efijery fampiasa ary ny famokarana voalamina.
* Ny fitaovana buffer dia napetraka eo amin'ny teboka fifandraisana eo anelanelan'ny singa telo amin'ny tsipika famokarana, amin'izay dia azo antoka ny asa azo antoka sy azo antoka.
* Manana ny fiasan'ny tavoahangy tsy misy famenoana izy io.
* Izy io dia manana rafitra famatsian-menaka afovoany izay afaka manampy menaka mora foana amin'ny teboka fanosorana.
Previous: Fanasan-damba mitondra fiara fitateram-bokatra mandeha ho azy
Manaraka: XH507 Dental Unit
LM Series Freeze fanamainana
Rafitra GV Series Automation